DHAGEYSO: Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo gudoomiyaha shirka qorshe howleedka qaranka. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO: Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo gudoomiyaha shirka qorshe howleedka qaranka.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya mudane Xassan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada oo looga arinsanayay dardargalinta qorshe howleedka qaranka oo la iskula soo qaaday arimo badan oo ka hadlaya howlaha ugu muhiimasan ee xukuumada horyaala.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya mudane Xassan Cali Khayre ayaa sheegay inay waajib tahay ka shaqaynta hormar dhinacyo badan oo dalka Soomaaliya looga saarayo dhibaatooyinka dhaqaale,colaadeed iyo kuwa kale oo mashaakil ku ah hormarka dalka.
Kulankaan ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay qodobada lagu guulaystay waxyaabihii looga hadlay shirkii kan ka horeeyay iyo caqabadaha ay lagama maarmaanka tahay in wax laga qabto si wada jira ah, Ra’isulwasaaraha ayaana sheegay in markasta Soomaaliya lagu qaymayn doono waxa ay qabtaan iyo talaabooyinka ay horay u qaadaan.
La dagaalanka falalka musuqmaasuqa ah ayaa ka mid ahaa qodobadii sida weyn ay iskula soo qaadeen golaha wasiirada Soomaaliya kulankoodii,ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Khayre ayaana sheegay in si shacabka tusaale wanaagsan loogu noqdo ay qasab tahay in golaha wasiiradu ay iska bilaabaan dagaalka Musuqa si dalka looga ciribtiro.
Kulankaan oo socon doono mudo labo cishe ah ayaa la doonayaa in lagu dajiyo qorshe howleedka qaran ee horu socodka u leh howlaha dowlada waana shir sanad leh ay midkii ka horeeyay ayaana la qabtay Bishii March ee sanadkii 2017-kii
← Qatar oo beenisay inay faragelinayso arrimaha gudaha ee Baxrayn
Xubno aqalka sare iyo Beesha Caalamka ka socda oo maanta ku wajahan magaalada Gaalkacyo. →